Khabar Nirantar | » शितल निवासमा तथ्यांक विभागका महानिर्देशकले राष्ट्रपतिलाई सोधे नाम र उमेर शितल निवासमा तथ्यांक विभागका महानिर्देशकले राष्ट्रपतिलाई सोधे नाम र उमेर – Khabar Nirantar
शितल निवासमा तथ्यांक विभागका महानिर्देशकले राष्ट्रपतिलाई सोधे नाम र उमेर
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ बिहीबारदेखि सुरू भएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासबाट जनगणना प्रारम्भ गरिएको हो।
बिहान साढे बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको लगत लिएर जनगणना सुरू गरिएको विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले बताए। राष्ट्रपति भण्डारीको व्यक्तिगत र पारिवारिक विवरण महानिर्देशक श्रेष्ठ आफैंले लिएका थिए।
राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीका अनुसार श्रेष्ठले गणकको रूपमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रश्न सोधेका थिए।
‘उहाँले सम्माननीयज्यूलाई नाम, उमेरलगायतका विवरण सोध्नुभयो। राष्ट्रपतिज्यूले केही प्रश्नको उत्तर आफैंले दिनुभयो,’ अधिकारीले भेन।
राष्ट्रपतिको लगत लिनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.रामकुमार फुयाल, आयोगका सचिव केवल भण्डारीसहितको टोली शितल निवास पुगेको थियो।
अबको १५ दिन अर्थात् कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ गतेसम्म हुने जनगणनामा देशका सबै घरमा यसरी नै गणकहरू पुग्नेछन्। यसका लागि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ४० हजार गणक परिचालन गरेको जनाएको छ।
गणकको कामलाई अनुगमन गर्न, वडा कार्यालयहरूमा सामुदायिक प्रश्नावली भर्नका लागि ८ हजार ५ सय जना सुपरीवेक्षक परिचालन गरिएको छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछिको यो पहिलो जनगणना हो। यस जनगणनाले संघीयताको मर्म अनुसार सेवाहरू विकेन्द्रित भए नभएको, नागरिकहरूको जीवनस्तरमा के कस्तो परिवर्तन भयो भन्ने कुराहरूको वास्तविक अवस्था झल्काउनेछ।
नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरले वि.सं. १९६८ सालबाट जनगणना लिने कार्य प्रारम्भ गरेका थिए। त्यसयता हरेक १० वर्षमा जनगणना हुने गरेको छ।
के-के विवरण लिइन्छ?
•तपाईंको परिवारमा अक्सर बसोबास गर्ने पुरुष, महिला र अन्य लिङ्गीहरूको संख्या कति छ? (अन्य लिङ्गी भन्नाले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्ति भन्ने बुझिन्छ।)
•तपाईं बसोबास गर्नु भएको घर वा अन्य प्रकारका घरको प्रयोग कसरी भएको छ? (यस प्रश्नबाट आवासीय, व्यापार व्यवसाय, सरकारी, शैक्षिक, स्वास्थ्यजन्य, उद्योग तथा कलकारखाना, बैंक तथा वित्तीय संस्था, संस्थागत, होटल तथा लज, गोठ तथा धन्सार र खाली घरहरूको संख्या प्राप्त हुन्छ।)
•तपाईंले उपभोग गरेको कृषि योग्य जग्गा जमिन र परिवारले पालन गरेको पशुपन्छीहरूको संख्या कति छ?
•तपाईंको परिवारले सरकारी अनुदान अन्तरगत आवासीय घर निर्माण गरेको छ/छैन।
•तपाईंको घरमा कति जना व्यक्तिको नाममा बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता छ?
•तपाईंको परिवारमा प्राविधिक तथा व्यावशायिक शिक्षा वा तालिम लिएका व्यक्ति कति जना छन्?
•तपाईंको परिवारले बैंक, सहकारी संस्था वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सुविधा लिएको छ?